Toddoba Kooxood Oo Ku Tartamaya Xiddig Ka Tirsan Liverpool Oo Jurgen Klopp U Sheegay In Aanu Qorshaha Ugu Jirin - Gool24.Net
Toddoba Kooxood Oo Ku Tartamaya Xiddig Ka Tirsan Liverpool Oo Jurgen Klopp U Sheegay In Aanu Qorshaha Ugu Jirin
Liverpool ayaa u sheegtay mid ka mid ah ciyaartoydeeda in loo ogol yahay inuu ka tago kooxda xagaagan, isla markaana aanu ku jirin qorshaha tababare Jugen Klopp ee xili ciyaareedkan.
Marko Grujic oo kasoo laabtay heshiis amaah ah oo uu labadii sannadood ee ugu dambeeyey ugu maqnaa Hertha Berlin, waxa uu ahaa saxeexii ugu horreeyey ee Jurgen Klopp uu sameeyey markii uu kooxda yimid sannadkii 2016, laakiin waxa uu ka waayey wixii uu ka filayay kaddib 14 ciyaarood oo fursad loo siiyey inuu ku kasbado booskiisa.
Laacibkan ayaa saftay kulan saaxiibtinimo oo ay Sabtidii la ciyaartay Liverpool naadiga reer Germany ee Hertha Berling, waxaana la filayaa inuu noqdo kulanka ugu dambeeya ee uu xidho garanka Reds, kaddib markii uu tababare Jurgen Klopp go’aamiyey in laacibkan la iibiyo.
Liverpool ayaa u sheegtay kooxaha danaynaya inay ku heli karayaan £20 milyan oo Gini, waxaana durba xiisahooda muujiyey toddoba ciyaartoy oo danaynaya inay lasoo saxeexdaan 24 jirkan reer Serbia.
Kooxaha Hertha Berlin oo laba sannadood oo amaah ah uu kula joogay, Eintracht Frankfurt, Borussia Moenchengladbach, Werder Bremen, Atalanta, Crytal Palace iyo Aston Villa ayaa dhamaantood muujiyey inay doonayaan laacibikan.
Hertha Berlin ayaa ku doonaysay heshiis amaah ah oo sannadkii saddexaad ah, kaddibna ay si rasmi ah ula wareegto xagaaga sannadka dambe ee 2021, hase yeeshee Liveprool ayaa doonaysa inay hesho lacag kaash ah waqtigan, taas oo ay u adeegsan doonaan Thiago Alcantara oo ay kala soo wareegayaan Bayern Munich.